Gandaki Sanchar » खगेन्द्रकाे फिल्मबाट दर्शक बढी सन्तुष्ट !
खगेन्द्रकाे फिल्मबाट दर्शक बढी सन्तुष्ट !
काठमाडौं/दर्शकले अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेका फिल्मबाट बढी सन्तुष्टि पाएको देखिएको छ । फिल्मपत्रिकाले गरेको लघुसर्वेक्षणमा खगेन्द्रको पक्षमा बढी मत आएको हो । कुन कलाकारको फिल्मले बढी सन्तुष्ट हुनुभएको छ भन्ने प्रश्न हामीले सर्वेक्षणमा राखेका थियौं । सहभागी ३५० जनामध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् २७ प्रतिशतले खगेन्द्रको नाम लिएका छन् ।
खगेन्द्रले मनोज पण्डितको ‘वधशाला’बाट फिल्ममा डेब्यु गरेका हुन् । तर, उनलाई दर्शकले नोटिस गरेको चाहिँ फिल्म ‘टलकजंग भर्सेस् टुल्के’बाट हो । खगेन्द्र आफू पनि निर्माता रहेको उक्त फिल्मलाई निश्चल बस्नेतले निर्देशन गरेका थिए ।
त्यसपछि उनी ‘पशुपतिप्रसाद’ फिल्मबाट दर्शकसँग अझ नजिकिएका हुन् । सम्भवतः उनले बढी मत पाउनुमा दीपेन्द्र के खनालद्वारा निर्देशित यही फिल्मको योगदान रहेको छ । उनले ‘धनपति’ र ‘डमरुको डन्डिबियो’मा समेत अभिनय गरिसकेका छन् । तर, उनलाई अझै पनि धेरैले ‘पशुपतिप्रसाद’कै कारण सम्झिन्छन् ।
सर्वेक्षणको दोस्रो स्थानमा दयाहाङ राई छन् । खगेन्द्र र दयाहाङको प्राप्त मतमा खासै अन्तर छैन । दयाहाङको फिल्मबाट बढी सन्तुष्ट छु भन्ने सहभागी २४ प्रतिशत छन् । दयाहाङले निश्चल बस्नेतको ‘लुट’बाट दर्शक रिझाउन सफल भए पनि त्यो फिल्मबाट बढी जस सौगात मल्लले पाएका थिए । त्यसैले दयाहाङलाई सोलो हिरोका रुपमा स्थापित गराउने फिल्म रामबाबु गुरुङको ‘कबड्डी’ नै हुनपुग्यो ।
फिल्मपत्रिकाले फेसबुकमार्फत गरेको यो लघुसर्वेक्षणको तेस्रो नम्बरमा सौगात मल्ल परेका छन् । उनलाई १६ प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ । भूषण दाहाल निर्देशित ‘कागबेनी’ उनको डेब्यु फिल्म हो । तर, ‘लुट’मा हाकु काले पात्रको भूमिका निर्वाह गरेपछि मात्र उनी दर्शकको आँखामा पर्न सफल भएका हुन् ।
पछिल्लो समयमा दयाहाङ र सौगातले जस्तोसुकै फिल्म खेल्दै आएका छन् । यही भएर पनि उनीहरुप्रति दर्शकको विश्वास घट्दै गएको हो । शुभचिन्तकहरुले उनीहरुलाई छानेरमात्र फिल्म खेल्न सुझाएका छन् ।
सर्वेक्षणमा विपिन कार्कीले चौथो स्थान हासिल गरेका छन् । उनको मत १३ प्रतिशत रहेको छ । ‘लुट’मै पनि विपिनले अभिनय गरेका थिए । तर, उनले निगम श्रेष्ठको ‘छड्के’बाट अलि बढी फ्यान कमाए । ‘पशुपतिप्रसाद’को ‘भष्मे डन’ उनको नयाँ ‘निक नेम’ नै भइसकेको छ । प्रदीप भट्टराईको ‘जात्रा’ उनले सबैभन्दा बढी स्पेस पाएको फिल्म हो ।
सर्वेक्षणमा १० प्रतिशतले अनमोल केसी र ८ प्रतिशतले प्रदीप खड्काको नाम लिएका छन् भने २ प्रतिशत सहभागीहरुले चाहिँ पल शाह, आर्यन सिग्देल, सलिनमान बनियाजस्ता नाम रोजेका छन् । हल्काफुल्का रोमान्टिक लभस्टोरीमै सीमित भएकाले अनमोल र प्रदीपले तुलनात्मक रुपमा थोरै मत पाएका हुन् ।
उनीहरुको स्टारडम अरु कलाकारको दाँजोमा बढी छ । तर, फिल्मलाई कलाको विधा मान्ने समूहको प्राथमिकतामा उनीहरु पर्न सफल भएका छैनन् । दुवैले भविष्यमा समेत फर्केर हेर्न मिल्ने कालजयी फिल्म खेल्न बाँकी नै छ ।
प्रकाशित मिति १९ जेष्ठ २०७५, शनिबार १२:१९